Thursday December 05, 2019 - 20:49:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
C/Raxmaan Cabdi Shakuur ayaa beeniyay Xadiith Saxiix ah
Hadalkan ayuu C/Raxmaan C/Shakuur ku beeniyey xadiith saxiix ah oo ka sugan Nabi Maxamad salallaahu caleyhi wasala islamarkaana ku qoran maraajicda waaweyn ee Islaamka sida Muslim iyo Bukhaari.
Barnaamijkan oo ay ka qeybgaleen qaar ka mid ah culimada Muslimiinta ayaa lagu faaqiday waxa uu yahay xadiithkan, sixadiisa, iyo weliba waxa uu noqonayo qofka beeniya xadiith ka mid ah axaadiithta ka sugan nabiga.
Mid ka mid ah Culimada oo si kulul kaga carooday waxa uu ku hadlay siyaasigan ayaa sheegay in ninkan uu mudan yahay in laga badalo magaca wanaagsan ee uu wato loona bixiyo Cabdi Kaffuur ama Cabdi Diinaar maadama uu yahay addoon Allaah ku kufriyay adduunyo raadin darteedna ugu gefay axaadiithta suubanaha.
Culimada ayaa sidoo kale si aad ah uga hadlaya marin habaabinta uu bulshada ku hayo ninkan, iyagoo isdul taag kooban ku sameynaya haweeneyda uu soo daliishaday ee la yiraahdo Balqiis taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd haweeney dimuquraadi ah sida uu hadalka u dhigay.
Hadaba halkaan ka degso Falanqeyta oo dhameystiran MP3 ama hoos ka dhageyso